(543 okushiwo abanye)
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Bob & Sarah
Idolobhana elisogwini elithule phakathi kwe-Bay of Fires ne-Coles Bay.
Umklami wakhiwe, wakhuluma, ukhululekile futhi unethezekile i-Beach House.
Ukubukwa kwe-Ocean, ikhishi le-gourmet, indawo evulekile yokuhlala, indawo yokuhlala enkulu, okomlilo wezinkuni, igumbi lokugezela elipholile, ishawa yangaphandle kanye negumbi lokulala lesibili elijabulisayo.
Sicela uqaphele, awekho amaKhafe noma izitolo, iziteshi zikaphethiloli njll e-Falmouth ngokwayo. Okuseduze yiSt Marys noma iScamander yomibili i-10mins, noma iSt Helens imizuzu engama-20, ukude ngemoto.
SICELA UQAPHELE LENA AKUYONA INDLU YEQEMBU
I-Falmouth iyindawo ekhethekile eSiqhingini esiyingqayizivele ..... iphumule kakhulu !
I-Sheoaks inothile ngesitayela nokunethezeka, siyiklamile futhi siyakha futhi sethemba ukuthi uyayithanda futhi uyayijabulela njengoba senza. Kuyisisekelo esihle sokuhlola lonke ugu, eNyakatho kuya ku-Bay of Fires South kuya eFreycinet kanye nayo yonke indawo ephakathi.
Yebo ungavele nje uzihlalele e-Falmouth, ukukama ogwini, ukudlala ithenisi, ukuyodoba noma ukutshuza, ukubhukuda emanzini afudumele e-Henderson's Lagoon, hamba ukuntweza, ugibele ibhayisikili lakho, noma uzipholele eduze kwase-Sheoakes futhi ufunde leyo ncwadi/umagazini. ubuqonde.
Noma mhlawumbe ulale uzungeza amadekhi elangeni futhi ubheke izikebhe zokudoba, izikebhe zaseSydney Hobart zigijima phansi ogwini noma iSouthern Right kanye ne-Hump back whales ekhukhulekayo, ngezinye izikhathi igqekeza phambi kwakho kuye ngesikhathi sonyaka.
Pheka isiphepho ekhishini le-gourmet, elifakwe i-kitchenware yekhwalithi. Isitovu segesi, ihhavini eliphoqelelwe lefeni likagesi, i-Miele dish washer microwave, ikhofi njll, uthola isithombe.
P.S. Ebusuku obucwathile isibhakabhaka senza umbukiso omangalisayo .... i-Milky Way - Enjoy !!
I-PPS. Yiya ezansi ku-Stiglitz Street, phambi kwendlu kukhona indlela yokufinyelela ku-“Coastal Walk” ezokuthatha ugudle ugu uye endaweni enkulu, echibini namabhishi ....... amahle !
4.93(543 okushiwo abanye)
4.93 · 543 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-543
I-Falmouth ikude nomzila wezivakashi osogwini olusempumalanga ngakho-ke awekho amalambu asemgwaqweni, awekho izitolo/amagalaji kaphethiloli, anemigwaqo ewubhuqu njll, athule kakhulu ........ kuhle kakhulu sikuthanda kanjalo. Ngakho woza ugcwele ukudla newayini. Isitolo/isiteshi sikaphethiloli esiseduze siqhele ngamaminithi angu-10-15 ngemoto e-St Marys noma phezulu ogwini e-Scamander.
Sisuka eHobart amahora angu-3 futhi sisuka eLaunceston.
Ihora eli-1 ukuya e-Bay of Fires ukuya eNyakatho nehora elingu-1 ukuya eNhlonhlweni yeFrecinet eningizimu.
Kukhona uhambo olukhulu olusogwini, ukufinyelela kuphansi komgwaqo phambi kwendlu. Lokhu kuzokuyisa ogwini, i-headland kanye nechweba lika-Henderson.
Ibungazwe ngu-Bob & Sarah
Sobabili mina noSarah siyatholakala ngocingo noma nini ngesikhathi sokuhlala kwakho uma unemibuzo.
UBob & Sarah Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: 2242019